Ted Lasso စီးရီး Apple TV + အတွက်ဆု ၃ ခုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ted Lasso စီးရီးဟာ Apple TV + အတွက်ဆုအသစ် ၃ ခုကိုရရှိခဲ့သည်
Ted Lasso ဟာသကိုလက်ခံရရှိသည့်များပြားလှသောအဆိုပြုချက်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကရက်သတ္တပတ်များစွာကြာအောင်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Apple ၏ဗီဒီယို streaming ဝန်ဆောင်မှု၏တစ်ခုတည်းသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆုများ၏အာရုံကိုစပါးကိုရိတ်လိုက်ပါတယ် ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှစ်ခုလုံး။
ရက်သတ္တပတ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသက်ဆိုင်ရာဆုအခမ်းအနားများကျင်းပသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Jason Sudeikis သည်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုကိုရရှိခဲ့သည် တစ် ဦး ဟာသစီးရီးအတွက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်။ ရုပ်ရှင်ဝေဖန်သူများ Awards သည် Ted Lasso စီးရီးများကို ၂၀၂၀ အကောင်းဆုံးစီးရီးများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ဝေဖန်သူများကဆုပေးပွဲကို Ted Lasso ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည် အကောင်းဆုံးဟာသစီးရီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာများ၊ လေယာဉ်မယ်၊ မေမေ၊ Pen2020၊ ရမ်မီ၊
Jason Sudeikis သည်လည်းဆုကိုရရှိခဲ့သည် တစ် ဦး ဟာသစီးရီးအတွက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်။ Sudeikis သည်သူမ၏ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်အနေဖြင့်ကန ဦး အကြံဥာဏ်ရှိသူဖြစ်သောကြောင့်သူမအနေဖြင့်သူ၏ Olivia Wilde (သူ၏ယခင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်) အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Ted Lasso စီးရီးအတွက်တတိယဆုကို Hannah Wadingham ဆုအဖြစ်ရရှိခဲ့သည် ဟာသစီးရီးများတွင်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးသည့်မင်းသမီး.
Ted Lasso ကိုရွှေကမ္ဘာလုံးဆုများနှင့်တူညီသော Screen Actors Guild Awards အတွက်လည်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။ တစ် ဦး ဟာသစီးရီးအတွက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင် y အကောင်းဆုံးဟာသ။ Screen Actors Guild Awards ဆုပေးပွဲကိုAprilပြီလ ၄ ရက်နေ့မှာကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်၎င်းကိုစာရေးသူများအသင်းဆုများအဖြစ်အမျိုးအစားများဖြင့်လည်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းသည်။ အကောင်းဆုံးဟာသစီးရီး, အကောင်းဆုံးနယူးစီးရီး y ဟာသစီးရီး၏အကောင်းဆုံးရှေ့ပြေးအပိုင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » NOTICIAS » Ted Lasso စီးရီးဟာ Apple TV + အတွက်ဆုအသစ် ၃ ခုကိုရရှိခဲ့သည်
Insta360 GO 2, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသေးငယ်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကင်မရာ၏ဗားရှင်းအသစ်